Kitra any Eoropa – «Ligue des champions» : hiezaka hanao “remontada” ny AS Roma | NewsMada
Kitra any Eoropa – «Ligue des champions» : hiezaka hanao “remontada” ny AS Roma
Ho fantatra anio talata, ireo ekipa roa tafita hiatrika ny lalao manasa-dalana hiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions”, taranja baolina kitra. Hiezaka hanao “remontada” manoloana ny Barcelone ny AS Roma.
Hotanterahina, anio, ireo lalao ampahefa-dalana miverina anankiroa, hiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions”, taranja baolina kitra. Anisan’izany ny fihaonana eo amin’ny FC Barcelone sy ny AS Roma. Handray an-dry Messi ao amin’ny kianja filalaovany, ao Olimpico, ny Romanina.
Raha tsiahivina, efa resin’ny Barcelone, tamin’ny isa mazava 4 no ho 1, ny AS Roma, teo amin’ny lalao mandroso, herinandro lasa izay. Mihevitra ny hamadika ny tantara ka hanao “remontada”, manoloana ny Barça, ry zareo Romanina, amin’ity. Vonona amin’izany ireo mpilalao ary tapa-kevitra ny handrodana ny nofinofin’ny Espaniola. Nambaran’ny mpanazatra an-dry zareo Romanina fa tombony ho azy ireo ny baolina tokana tafiditra tany Camp Nou.
Nohamafisiny fa betsaka ireo baolina tokony ho faty nandritra iny lalao mandroso iny saingy tsy tao amin’izy ireo ny vintana. Mbola be fanantenana izy ireo ny handresy ary hanohy ny lalana, eo amin’ity fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa, ity.
Ho an’i Gérard Piqué, mpilalaon’ny Barcelone indray, efa any amin’ny manasa-dalana ny tongotry ny Barcelone. Na izany aza, nanambara ny tenany fa mila mailo satria ekipa mahay sy teknisianina ny Romanina.
Lalaon’ny samy Anglisy
Ho an’ny lalao faharoa indray, adin’ny samy Anglisy. Hampiantrano ny Liverpool, ao amin’ny kianja Etihad Stadium, amin’ity anio ity, ny ekipan’ny Manchester City. Hanala vela, amin’ity ny Citizen, izay efa resin’ny Liverpool, tamin’ny isa mazava 3 no ho 0 nandritra ny lalao mandroso.
Mihevitra ny mpanara-baovao fa mety tsy hahasakana ny lalan’ny Liverpool amin’ity ny Manchester City, na hilalao ao amin’ny kianja mahazatra azy aza. Ho an’ny Liverpool, mbola vonona ny hanamafy ny fandresena efa azony ry zareo amin’ity.